I-Edgar Allan Poe Biography kanye nezincwadi ezihamba phambili | Izincwadi Zamanje
I-Edgar Allan Poe Biography nezincwadi ezihamba phambili
U-Alberto Legs | | Abalobi, Amabhuku, Literatura, eziningana
Lapho singena ngomkhumbi izincwadi ezesabekayo noma eziqanjiwe zesayensiBambalwa abalikhumbulayo iqiniso lokuthi kwake kwaba khona umbhali owabe nesibindi sokuwela imingcele ethile futhi wabheja uhlobo oluyingqayizivele ngesikhathi soguquko olukhulu lwemibhalo. Naphezu kokuphila okudumile, u-American Edgar Allan Poe uyaqhubeka nokuba njalo inkomba yezinhlamvu ezimbi kanye nendaba emfushane kanye nesibonelo sabo bonke labo babhali abake baba nesibindi sokuphila kuphela kusuka eqanjiwe. Ake sihlole indlela I-edgar Allan Poe biography nezincwadi ezinhle kakhulu ukuze wazi izimfihlo zale wizadi emnyama.
1 I-Edgar Allan Poe Biography
2 Izincwadi ezihamba phambili ze-Edgar Allan Poe
2.1 I-Arthur Gordon Pym Narrative
2.2 Ikati elimnyama
2.3 Imbungulu Yegolide
2.5 Qedela izindaba
I-Edgar Allan Poe Biography
Ukuqoshwa kuka-Edgar Allan Poe. Ngu-Edouard Manet.
Wazalelwa eBoston ngoJanuwari 19, 1809, U-Edgar Allan Poe wabhapathizwa ngemuva komlingisi ovela kuKing Lear kaWilliam Shakespeare. Ngemuva kokubaleka ekhaya lomndeni kayise lapho uPoe ayenonyaka owodwa nje kuphela nokufa kukanina ebulawa yisifo sofuba ngemuva konyaka, u-Edgar wahamba emhlabeni ephethe isithombe sabazali bakhe njengokuwukuphela kwenkumbulo ebonakalayo yemvelaphi yakhe. Ngenkathi udadewabo uRosalie ethathwa ngogogo nomkhulu wakhe, uPoe yamukelwa ngumshado kaFrances noJohn Allan, athola kuye imfundo e-United Kingdom ngaphambi kokubuyela eRichmond (eVirginia) ngo-1820.
Kakade esemusha, uPoe wakhombisa amakhono akhe okubhala ukubhala inkondlo eya kumama walowo ofunda naye ogama lakhe lingu "To Helen", kubhekwe uthando lwakhe lokuqala olukhulu. Phakathi nalesi sigaba, leyo ngane emnyama yayisiba nobuntu bokungazethembi nobemvelo obuthola ezincwadini noma izifiso zayo zobuntatheli indlela yokuthola amandla phezu kwabo bonke abantu ayekade ehlukanisiwe nabo. Kakade ezinsukwini zakhe zaseyunivesithi, lowo mlingiswa wagcina echaza indoda eyayizikholelwa ukuthi inolwazi oluphakeme yize kukhona okuthile okuyisisekelo. Isifiso esasizoncipha lapho ubaba wakhe wokutholwa engakwazi ukukhokha izikweletu zikaPoe osemncane futhi wagcina eseshiye izifundo zakhe ukuze abhalise njengesosha eBoston. Ngesikhathi esebenza ebusosheni, wabhala izincwadi ezimbili zezinkondlo, kwalandela eyesithathu, eyakhokhelwa ngozakwabo, eyashicilelwa eNew York, lapho uPoe abalekela khona isikhundla sakhe sezempi ukuze akhe umsebenzi wokuba ngumbhali.
Eqinisweni, uPoe waba umbhali wokuqala owayezimisele ngokuphila kuphela eqanjiwe, inhloso eyinkimbinkimbi eminyakeni eyishumi yowe-1830 eyayikhungethwe ubunzima bezomnotho obathinta umkhakha wezemibhalo. Ngemuva uwine indondo ngendaba yakhe emfushane Umbhalo wesandla obhalwe ebhodleleniUPoe wathuthela eBaltimore, lapho ashada khona nomzala wakhe uVirginia Clemm, owayeneminyaka eyishumi nantathu kuphela ubudala. Ekhishwe ifa lomcebo kababa wokutholwa obudlelwano bakhe buzobonisa ubunzima obubucayi uPoe azama ukukufeza ngezifiso zakhe zemibhalo, waqala ukubhala ephephandabeni laseRichmond ukusakazwa kwalo kwanda ngenxa yodumo lomlobi, ukubuyekeza kwakhe nezindaba zakhe zesiGothic, uhlobo bese kungaziwa eNtshonalanga. Kodwa-ke, kakade ngaleso sikhathi izinkinga zakhe ngotshwala zazidume kabi.
Phakathi neminyaka eyalandela, u-Edgar Allan Poe waxhuma izinkathi zokwamukelwa okukhulu nokuncane: kusukela ekunqatshweni kommemezeli waseNew York kuye Indaba emfushane Izinganekwane zeFolio Club ikubheka njengefomethi engeyona eyezentengiselwano ngaleso sikhathi, kuze kube izinyanga zilambile empeshenini ePennsylvania noma ukwakhiwa kwendaba yamaphoyisa kwiGraham's Magazine, eyavumela umndeni ukuthi uphile esinye sezikhathi zawo zomnotho ezinhle kakhulu.
Kodwa-ke, ukufa kukaVirginia ngenxa yesifo sofuba ngo-1847 kwafaka uPoe ekucindezelekeni okwaminza otshwaleni nase-laudanum okwakuzoqeda impilo yakhe ngo-Okthoba 3, 1849, usuku umbhali abhala ngalo Watholwa esesimweni sokudideka emigwaqweni yaseBaltimore emahoreni ambalwa ngaphambi kokufa kwakhe.
Izincwadi ezihamba phambili ze-Edgar Allan Poe
Ngaphambi kokuqhubeka, kufanele kukhunjulwe ukuthi cishe wonke umsebenzi kaPoe ususelwe ezindabeni, izindaba ezazinoveli ngaleso sikhathi futhi ezifakwe kuma-anthologies ahlukene phakathi neminyaka elandelayo. Ngale ndlela, sibukeza imisebenzi emihle yombhali ngezindaba zakhe kanye nenoveli yakhe okuwukuphela kwayo.
I-Arthur Gordon Pym Narrative
Inoveli ka-Edgar Allan Poe kuphela Yanyatheliswa kancane kancane ngo-1938, kwaphumela komunye wemisebenzi eyindida kakhulu yombhali. Itulo elisiyisa kuzo zonke izilwandle u-Arthur Gordon Pym angena phakathi kulo ngomkhomo iGrampus. Ukulandelana kwama-mutinies kanye nokuphahlazeka komkhumbi ekugcineni okuholela ku-protagonist ukufuna izimpendulo, bekhathele ubukhona bakhe, ezindaweni ezikude nezinesizungu e-Antarctica. Ukuphefumulelwa okumsulwa kwabafundi bombhali njengoLovecraft, le noveli iyaqhubeka nokuba ngenye yezindaba ezivelele kakhulu zePoe.
Ungathanda ukufunda Ayikho imikhiqizo etholakele.?
Ishicilelwe ngo-1843 kumagazini we-Philadelphia Saturday Saturday Evening, Ikati elimnyama kungenzeka Inganekwane kaPoe edume kakhulu kanye ne-catalyst ethembekile yaleyo ndawo embi futhi emnyama. Le ndaba isisa ekhaya lombhangqwana osemusha oshadile othola ikati, isilwane esibulawa ngumyeni ngesikhathi sokudakwa. Ukuvela kwekati lesibili kuzonciphisa ukuvumelana komndeni, kuholele ukulandisa emphumeleni okhombisa ubuntu bale ndaba obukhombisa ingxenye yesimo lapho uPoo ayehlala khona nemizwa efana nentukuthelo, ububi noma intukuthelo.
Ishicilelwe ngo-1843 kwi-Philadelphia Dollar Newspaper, Imbungulu Yegolide utshela umhlangano womngani kaWilliam Legrand onesizungu nenceku yakhe uJupiter esiqhingini esiseduze naseCharleston lapho bathola khona umqulu obethelwe oveza indawo yengcebo yesigebengu.
Yiba yisithonjana sePoe universe futhi umsebenzi omkhulu owamenza wahlonishwa umhlaba wonke, Ayikho imikhiqizo etholakele. inkondlo eyashicilelwa ngo-1845 kwiNew York Evening Mirror. Njengoba kunikezwe isimo esibi nolimi oluyisitayela, lo msebenzi ulandisa ukuvakashelwa kwegwababa efasiteleni lomthandi ososizini, uphawu lokwehla komuntu ophikisayo esihogweni uqobo.
Uma ufuna i-anthology ehlanganisa ndawonye ingxenye yomsebenzi kaPoe, uhlelo lwakhe Qedela izindaba enyatheliswa Penguin ubutha up Imisebenzi engama-72 yombhali, kufaka phakathi izandulela zamaNdaba akhe weFolio Club kanye nezindaba zeqoqo leGrotesque ne-Arabesque, kanye nezindaba eziyisikhombisa ezingashicilelwe ngeSpanishi.
Yimiphi imisebenzi oyithandayo kaPoe?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » I-Edgar Allan Poe Biography nezincwadi ezihamba phambili
Ekhuluma noJavier Alonso García-Pozuelo, umbhali weLa cajita de snuff
I-Biography nezincwadi ezinhle kakhulu zikaMiguel Delibes